यो झटारो - ईटा, ढुंगा, मुढा वा जुत्ताको झटारो हैन । तपाइँ बसेको गाम, ठाम, देशाँ र तपाईका समाजाँ अनेकथरीका विकृति र कुतत्वहरु देखि तपाईलाई नि कैलेकाही वाक्क लागेर आउदो हो । अगाडी जे भेट्यो त्यसले हानुम हानुम लाग्दो हो ? तर केले हान्ने, कसलाई पो हान्ने ? भन्नुस त ।
फेरी हामीले हानेको झटारोले ताकेको ठाममा लाग्ला र विसंगतिको टाउको नै फुट्ला भन्ने पनि त छैन । मनमा उठ्ने यस्तै उकुशमुकुशलाइ पोको पारेर ब्लगमा हाल्न पर्यो भनेर 'झटारो' नाम राखेको हो । आफुलाई चाहि "झटारो काइला" भनेर न्वारन गरियो ।
ईमेल गर्न मन भए -